Ny sanganasan'ny taratasy an'ity artista ity izay antsoina hoe "injenieran'ny taratasy" | Famoronana an-tserasera
Rehefa mihaona famolavolana amin'ny taratasy ny injeniera
Matthew Shlian dia mpanakanto milaza ny tenany ho "injenieran'ny taratasy". Ny antony an'izany dia miharihary kokoa noho ny fijoroantsika ho vavolombelona amin'ny sasany amin'ireo sanganasany. Indrindra ho an'ny ambaratonga lehibe amin'ny fandinihana izay saika asan'ny injeniera.
Izany hoe saika afaka miresaka momba ny asany izy ireo toa vita amin'ny masinina sasany izy ireo fa afaka mahatratra izany ambaratonga fahalavorariana izany izy. Ary tsy misy dikany, izany rehetra izany amin'ny tanana ary amin'ny fiezahany sy ny finiavany hiantso ny tenany hoe «injenieran'ny taratasy».
Shlian dia mahay ny kanto amin'ny taratasy ary noho ny fahaizany lehibe fananganana mozika izay averimberina tsy tapaka. Ity endrika tsy miova ity dia asa tsy manam-paharoa izay mitondra antsika any amin'ny sehatra hafa amin'ny gradients ampiasainy.
Mampiasà miasa a karazana taratasy samy hafa. Ny fomba fiasany dia manomboka amin'ny hevitra efa voafaritra mialoha momba ny zavatra tiany hatao mba hanatanterahana azy io amin'ny farany amin'ny fitaovana nofidina hanombohana mamoritra azy ireo.
Raha atao teny hafa, dia mamela toerana ho an'ny improvisation araka ny mandroso amin'ny aritmetika amin'ireo vala ireo izay no manome ny hevi-dehibe. Tsy latsa-danja ihany koa amin'ny loharanom-panentanam-panahy miainga amin'ny famolavolana sela fotovoltaika, lamina mosaika Silamo ka hatramin'ny rafitr'ireo kolontsaina samihafa.
Io aingam-panahy io dia afaka mampifangaro azy mba hamoronana lamina asa taratasy fa noho ny haibolany dia afaka manome faranana samihafa. Asa iray amin'ny taratasy feno antsipiriany ary ahafahantsika very raha mitady lesoka amin'ny endriny isika.
Manoro hevitra anao izahay handalo ho an'ny Instagram so it fantaro fa izy io dia miasa miaraka amin'ny loko voalohany tsy hamela na inona na inona ankilany. Aza adino sangan'asan'ny artista trozona iray amin'ny taratasy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Rehefa mihaona famolavolana amin'ny taratasy ny injeniera
Telescope dia fitaovana fanontana vaovao ho an'ny tranonkala
Remix 3D dia hesorin'i Microsoft amin'ny farany